अनन्त अम्बानीले १०८ किलो वजन घटाउन के के गरे त ?
सोमबार, २९ चैत, २०७२
१०८ किलो शरिरको वजन घटाउन सम्भब होला त ? सुन्दा पनि अचम्म लाग्न सक्ला । यदि मानिसमा दृढ इच्छाशक्ति भएमा सकिन्छ भनेर नै प्रमाणित गरिदिएका छन् एक २१ वर्षिय युवाले । डेढ वर्षभित्र १०८ किलो शरिरको तौल घटाएरे चौतर्फी चर्चाको पात्र बनेका छन् अनन्त अम्बानी ।
भारतका नामी उद्योगपति मुकेश अम्बानी र नीता अम्बानीकी कान्छा छोरा अनन्त अम्बानीको यस्तै एक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । कांग्रेसका नेता राजिब शुक्लाले अनन्त अम्बानीसँगको तस्बिर शेयर गरेका छन् ।
अन्नत अम्बानीको २१ औ जन्मदिनमा शुक्लाले उनीसँग तस्बिर लिएका थिए । १८ महिनाभित्र १०८ किलो वजन घटाउनु कुनै चानेचुने कुरा होइन । त्यो पनि विना अप्रेशन । उनले डेढ वर्ष अघि आफ्नो वजन जसरी भएपनि घटाउने भनी कसम खाएका थिए ।
उनले अप्रेशनभन्दा पनि प्राकृतिक रुपमा मोटोपन घटाउने बाटो रोजे । उनले प्राकृतिक रुपमा तौल घटाउन सबै प्राकृतिक नियमको पालना गरे । उनी दैनिक २१ किलोमिटर हिड्ने गर्थे ।
दैनिक ५ देखि ६ धण्टा कसरत गरेका उनले योगा र ट्रेनिङमा पनि ध्यान दिए । उनले कडा कार्डियो कसरत गर्दै सुन्य सुगर र कम कार्बोहाइड्रेड भएको खाना खाएका थिए । उनले खानामा फ्याट र प्रोटिनलाई मूख्य ध्यान दिएका थिए । उनले आफ्नो वजन घट्दै गएपछि आमा नीता अम्बानी धेरै खुसी भएको बताएकी छिन् ।
हाल लिएको फोटो र करिब दुई वर्ष अघि आइपिएलमा लिएको फोटोमा अनन्तको वजनमा आकाश जमिनको फरक देखिन्थ्यो ।
अनन्तको हाल चौतर्फी तारिफ गरिएको छ । उनले आफ्नो वजन घटाउन देखाएको दृण इच्छाशक्तिका कारण धेरै मोटा मानिसहरुको आइडियल बनेका छन् ।